Asus ROG Strix G531, solosaina finday ho an'ny mpilalao indrindra, dia mamakafaka azy | Vaovao momba ny gadget
Asus ROG Strix G531, solosaina finday ho an'ny mpilalao indrindra, no andalinantsika izany
Fantatsika fa ny purista indrindra dia tsy mieritreritra gamer "laptop", na izany aza, ity vokatra ity dia mihamitombo hatrany noho ny filàna sy ny fivezivezena ary ny fitomboan'ny kalitaon'ireo singa izay ny orinasa toa ny Alienware sy ny ASUS dia miakatra ao anatin'ireo notsikeraina be ireo ekipa taloha. ASUS dia te-hanasarotra zavatra ho an'ireo mitsikera ireo vokatra ireo. Ao amin'ny fiaraha-miasa farany ataonay amin'ny ASUS dia eo am-pelatanantsika ny ROG Strix G531, solosaina finday iray gamer izay misaotra ny mampiavaka azy dia mikasa hisarika mpanaraka vitsivitsy. Raha te hahafantatra ny fomba iarovany tena sy ny toetra mampiavaka azy ianao dia mijanona ao amin'ny fanadihadianay amin'ny unboxing.
Toy ny tamin'ny fotoana maro, nanapa-kevitra ny hiaraka amin'ity famakafakana ity izahay miaraka amin'ny horonan-tsary iray izay hanampy anay hahita ny fomba fiasan'ity solosaina finday ity sy ny fomba hiarovany tena amin'ny lafiny rehetra, Izany no antony anasanay anao hijery ny horonan-tsary izay lohan'ity fanadihadiana ity sy hanararaotra ny kinova an-tsoratra ho an'ireo antsipiriany resahina ao. Ho fanampin'izay, ao amin'ny boaty fanamarihana amin'ny lahatsarinay YouTube dia hamaly ny fanontanianao rehetra momba ny vokatra izahay, afaka mampitombo ny fiarahamonina Actualidad Gadget miaraka amina Tiana sy mizara ilay horonan-tsary. Raha liana ianao, Azonao atao ny mividy azy amin'ny 1.199 euro amin'ity rohy ity mankany Amazon izay hanananao fandefasana maimaim-poana sy antoka roa taona (LINK).
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mijery ireo pitsopitsony teknikan'ity solosaina finday ity, Tamin'ity indray mitoraka ity ASUS dia nanome maodely iray antsika izay manana ny fahasivy an'ny Intel Core i7, ny sary NVIDIA GeForce GTX 1660Ti ary ny 16 GB RAM ankoatry ny fanampiny hafa, noho izany dia hifantoka amin'ilay maodely manokana voadinika isika.
2 Ny rindrambaiko sy jiro be dia be
3 Sarimihetsika lehibe sy fifandraisana tsara
4 Volavola sy mari-pamantarana mahery setra
Asus ROG Strix G531 famaritana ara-teknika
modely ROG Strix G531
efijery 17.3-inch FullHD IPS LCD (Ultra-Wide)
processeur Intel i7 9750H na i5 9300H
Tahiry anatiny 1TB SSD
miteny Stereo 2.0 an'ny 4W tsirairay ary subwoofer pasif
fifandraisana 1x USB-C 3.2 - 3x USB-A 3.1 - 1x HDMI - RJ45 - Jack 3.5mm
Fitaovana hafa Quad LED rafitra
bateria Tokony ho 5 ora
lafiny 399 X 293 X 26
lanja 2.85 Kg
Ny rindrambaiko sy jiro be dia be
Manomboka amin'ny teboka tian'i ASUS asongadino angamba ambonin'ny hafa isika, Izy io dia manana mpankafy roa sosona, mifantoka amin'ity indray mitoraka ity ary manana heatsink roa eo an-damosina sy ny outlet eo aloha. Ireo mpankafy ireo dia azo ovaina mivantana arak'izay ilaintsika amin'ny alàlan'ny bokotra voatokana eo amin'ny fitendry, mazàna mamela antsika hisafidy izy: Silent, standard and turbo. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny maody ary ny maody mangina dia ankasitrahana. Tena miharihary fa ny maody Turbo dia miteraka rivotra mahomby kokoa, na izany aza, raha vao mangataka bebe kokoa amin'ny solosaina isika dia hitantana ho azy ny heriny sy ny fahombiazan'ny mpankafy.
Manana "Aura" ihany koa izahay, rindrambaiko ampidirin'i Asus ao anaty solosaina finday ary misy koa ny bokotra natokana ho azy izay ahafahantsika mamorona mombamomba ny maso sasany fa kosa ny rafitra fitantanana jiro LED dia miavaka ambonin'ny zavatra rehetra, Tsy hoe manana LED eo ambanin'ny lakilasy fotsiny isika fa manana tadim-pahazavana efatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny solosaina finday izay mahatonga azy io ho toy ny disko mandeha tokoa, Fa ny zandriny indrindra amin'ny tontolo «gamer» dia adala amin'izany, izaho koa somary tsy handà izany.
Sarimihetsika lehibe sy fifandraisana tsara
Raha manana fitaovana miaraka amin'ireo toetra mampiavaka antsika ireo isika, izay misy refy sy lanjany be loatra, angamba tsara kokoa ny misafidy haben'ny efijery lehibe kokoa, tsy lojika ny fahazoana kanto amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo teny ireo. Izany no antony nahatonga ilay kinova izay notsapainay 17,3 santimetatra tontonana ultra-wide, Mametraka takelaka LCD IPS izay manome 144Hz ny tahan'ny fanavaozana sy valiny 3ms miaraka amin'ny 100% amin'ny sRGB sy ny vahaolana Full HD. Mety hisy ny vahaolana hafa azo antenaina, saingy azo antoka fa nanimba ny mari-pana sy ny fahombiazan'ny fitaovana izany, ho fanampin'izany, mandritra ny 17,3 santimetatra dia afaka miaina miaraka amin'ny Full HD isika. Na izany aza, HDR sy Dolby Vision dia tsy voalaza, tsy afaka nitantana azy izahay ka takatray fa tsy misy an'io endri-javatra mahaliana io amin'ny lalao video sasany. Tsy maintsy asongadinay eto ireo izay hahatonga anao hisalasala raha tena avy amin'ny solosaina finday no tena izy.
Jack combo 3.5mm (ho an'ny mikrô)
Mikasika ny fifandraisana, mampiasa base somary fenitra izahay, tsy misy ny tsy fahampian'ny fifandraisana ary mizara tsara ny aoriana sy ny lafiny ankavia, manome fidirana ahazoana aina sy mamela ny fifandraisana mivantana amin'ny Ethernet sy HDMI izay mampatsiahy antsika indray fa na solosaina finday aza dia tsy natao hifindra be loatra. Mikasika ny fifandraisana tsy misy tariby dia misy a Dual antena WiFi mifanentana amin'ny tarika 2,4 GHz sy 5 GHz izay tamin'ny andrana nataonay dia nahitana fahombiazana tena tsara, ary koa Bluetooth 5.0, Tsy manadino na inona na inona izahay, amin'ny marina.
Volavola sy mari-pamantarana mahery setra
Vita amin'ny plastika mainty izahay, mamela ny jiro rehetra eo ambany. Tena ahazoana aina izy, manana kitendry nomerika ary ny fanalahidy WASD dia manjelanjelatra, maso gamer. Amin'ny lafiny iray dia manana sandry sandry tsara isika, angamba holazaintsika fa kely aza ny trackpad. Manana 360 x 275 x 26 milimetatra isika amin'ny lanjany tsy latsaky ny 2,85 kilao, araka ny efa nolazainay, tsy izy no zavatra mora entina indrindra ho hitanao.
Tena tiako ity solosaina finday ity fa miaraka amin'ny lozisialy ilay rindrambaiko ary tsy fampidirina an-tsokosoko satria nitranga tamin'ny marika hafa izay nosedraina. Fa ambonin'izany rehetra izany dia ny tena manome izay ampanantenainy no mahaliana indrindra. Na izany aza, nahita teboka ratsy aho, ny tena zava-dehibe dia ny trackpad, izay matetika mitranga amin'ny ASUS dia kely, tsy dia misy dikany ary miaraka amin'ny bokotra roa misy làlana tsy marina. Mifanohitra amin'ny dia marina amin'ny alàlan'ny fanalahidy sy ny bokotra sisa amin'ny solosaina.
Azonao atao ny mahazo azy amin'ny 1.199 euro mivantana amin'ny Amazon,Na dia manana fanamoriana isan-karazany aza ianao hanao an'izay tianao, dia azonao atao ny mitsidika ilay pejy tranokala natokan'ny ASUS ho an'ny vokatra.
Safidy fanaingoana tsara sy fampisehoana chord
Rafitra jiro mahaliana sy rindrambaiko natokana
Feo mahery sy fampisehoana mahomby
Kitendry fitendry kalitao
Trackpad dia tsy mifanaraka amin'ny fatra
Na eo aza ny fitantanana manual, dia be ny mpankafy
Somary mivelatra sy misavoritaka ny elanelam-bokatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Asus ROG Strix G531, solosaina finday ho an'ny mpilalao indrindra, no andalinantsika izany
LG dia manolotra ny elanelam-potoana vaovao ao amin'ny IFA 2019
eFootball PES 2020 FC Barcelona Edition dia efa manana daty fanombohana